တစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်း - CeleLove
May 12, 2019 Cele Love ဗဟုသုတများ 0
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များနေတယ် ဆိုရင်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ များနေတယ်ဆိုရင် အိပ်ပျော်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ အိပ်ပျော်ဖို့ ဆိုရင် စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ တစ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်းကို 4-7-8 နည်းလမ်းလို့ ခေါ်ပါတယ် …။
1. လေကို4စက္ကန့်ကြာအောင် ရှူသွင်းပါ …။
2.7 စက္ကန့်ကြာအောင် အသက်အောင့် ထားပါ …။
3.8 စက္ကန့်ကြာအောင် လေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှူထုတ်ပါ …။
ဒီနည်းလမ်းက ရိုးစင်းပေမယ့် အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပူပန်မှုတွေများလာရင် သွေးထဲမှာ အဒရီနလင်းဟော်မုန်းတွေ မြင့်လာပါတယ်။ အဲဒီအခါ အသက်ရှူနှုန်းတွေလည်း မြန်လာပါတယ်။ 4-7-8 နည်းလမ်းက စိတ်ငြိမ်ဆေး တစ်မျိုးပါပဲ …။
အသက်ကို မှန်မှန်ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်ခြင်းက နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်တာကို နှေးသွားစေပြီး စိတ်ကို မြန်မြန် တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ အသက်ရှူခြင်းကိုသာ အာရုံစိုက် ရတဲ့အတွက် စိတ်က မပျံ့လွင့်တော့ပါဘူး …။
အဲဒီအချိန်မှာ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းမှာ စိုးရိမ်မှုတွေ ၊စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို တဖြည်းဖြည်း လျှော့ချပေး သွားပါတယ်။ အသက် မှန်မှန်ရှူခြင်းက ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို တည်ငြိမ်သွားစေပါတယ်။ 4-7-8 နည်းလမ်းကို Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ Dr.Andrew Weil က ရာစုနှစ် များစွာကြာပြီဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယယောဂ ပညာကနေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သုတေသနပြုခဲ့ ကြပါတယ် …။
အိန္ဒိယတွေက အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို တရားထိုင်နေစဉ်မှာ စိတ်ငြိမ်ဖို့ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ညပိုင်းမှာ နိုးလာခဲ့ရင်လည်း 4-7-8 အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပေးရင် ပြန်ပြီး အိပ်ပျော်စေပါတယ် …။
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတော့မယ် ဆိုရင်လည်း 4-7-8 နည်းလမ်းက အသုံးဝင်ပါတယ်နော် …။
ညဖက်မှာ ကောင်းကောင်း အိပ်စက် အနားယူဖို့ဆိုရင်…..
-ပျားရည် 30 ဂရမ်
-ဆား 20 ဂရမ်
-အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
တို့ကို ရောပြီး သောက်လိုက်ရုံပါပဲ။ ရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး သောက်လို့ ရပါတယ်။ အာနိသင်က အတူတူပါပဲ။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေရုံမက ညဖက်မှာလည်း ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေပါတယ်နော် ….။
တဈမိနဈအတှငျး အိပျပြျောစမေယျ့ နညျးလမျး
စိတျဖိစီးမှုတှေ မြားနတေယျ ဆိုရငျ၊ စိုးရိမျစိတျတှေ မြားနတေယျဆိုရငျ အိပျပြျောဖို့ မလှယျတော့ပါဘူး။ အိပျပြျောဖို့ ဆိုရငျ စိတျကို ငွိမျငွိမျထားဖို့ လိုအပျလာပါပွီ။ တဈမိနဈအတှငျး အိပျပြျောစမေယျ့ နညျးလမျးကို 4-7-8 နညျးလမျးလို့ ချေါပါတယျ …။
1. လကေို4စက်ကနျ့ကွာအောငျ ရှူသှငျးပါ …။
2.7 စက်ကနျ့ကွာအောငျ အသကျအောငျ့ ထားပါ …။
3.8 စက်ကနျ့ကွာအောငျ လကေို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ရှူထုတျပါ …။
ဒီနညျးလမျးက ရိုးစငျးပမေယျ့ အလုပျ ဖွဈပါတယျ။ စိတျပူပနျမှုတှမြေားလာရငျ သှေးထဲမှာ အဒရီနလငျးဟျောမုနျးတှေ မွငျ့လာပါတယျ။ အဲဒီအခါ အသကျရှူနှုနျးတှလေညျး မွနျလာပါတယျ။ 4-7-8 နညျးလမျးက စိတျငွိမျဆေး တဈမြိုးပါပဲ …။
အသကျကို မှနျမှနျရှူသှငျး၊ ရှူထုတျခွငျးက နှလုံးခုနျနှုနျး မွနျတာကို နှေးသှားစပွေီး စိတျကို မွနျမွနျ တညျငွိမျစပေါတယျ။ အသကျရှူခွငျးကိုသာ အာရုံစိုကျ ရတဲ့အတှကျ စိတျက မပြံ့လှငျ့တော့ပါဘူး …။
အဲဒီအခြိနျမှာ အာရုံကွော အဖှဲ့အစညျးမှာ စိုးရိမျမှုတှေ ၊စိတျဖိစီးမှုတှကေို တဖွညျးဖွညျး လြှော့ခပြေး သှားပါတယျ။ အသကျ မှနျမှနျရှူခွငျးက ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးကို တညျငွိမျသှားစပေါတယျ။ 4-7-8 နညျးလမျးကို Harvard တက်ကသိုလျရဲ့ Dr.Andrew Weil က ရာစုနှဈ မြားစှာကွာပွီဖွဈတဲ့ အိန်ဒိယယောဂ ပညာကနေ တှရှေိ့ခဲ့ပွီး သုတသေနပွုခဲ့ ကွပါတယျ …။
အိန်ဒိယတှကေ အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျးကို တရားထိုငျနစေဉျမှာ စိတျငွိမျဖို့ ပွုလုပျကွပါတယျ။ ညပိုငျးမှာ နိုးလာခဲ့ရငျလညျး 4-7-8 အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျးကို လုပျပေးရငျ ပွနျပွီး အိပျပြျောစပေါတယျ …။
ပွိုငျပှဲတဈခုခု ဒါမှမဟုတျ အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခတြော့မယျ ဆိုရငျလညျး 4-7-8 နညျးလမျးက အသုံးဝငျပါတယျနျော …။
ညဖကျမှာ ကောငျးကောငျး အိပျစကျ အနားယူဖို့ဆိုရငျ…..
-ပြားရညျ 30 ဂရမျ
-ဆား 20 ဂရမျ
-အုနျးဆီ စားပှဲတငျဇှနျး တဈဇှနျး
တို့ကို ရောပွီး သောကျလိုကျရုံပါပဲ။ ရတေဈဖနျခှကျနဲ့ ရောပွီး သောကျလို့ ရပါတယျ။ အာနိသငျက အတူတူပါပဲ။ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးမှနျစရေုံမက ညဖကျမှာလညျး ကောငျးကောငျး အိပျပြျောစပေါတယျနျော ….။